Geparlys batch code decoder, jereo ny daty famokarana kosmetika
Ahoana no ahitako ny kaody andiany kosmetika na menaka manitra Geparlys?
Kosmetika novokarina na nozarain'ny Geparlys S.A.S.:
M1311 C1451 - Ity no kaody lot marina. Tadiavo ny kaody eo amin'ny fonosana izay toa izao
422 75008 80%VOL - Tsy code lot io. Aza ampidirina soatoavina mitovy amin'io.
Iza no mijery matetika ny datin'ny kosmetika Geparlys?
🇺🇸 Etazonia 11.63% 62
🇷🇺 Rosia 7.13% 38
🇸🇦 Arabia Saodita 4.88% 26
🇲🇦 Maraoka 4.69% 25
🇪🇬 Ejipta 3.75% 20
🇲🇾 Malezia 3.38% 18
🇩🇿 Alzeria 3.19% 17
Firy taona no nanamarina ny datin'ny Geparlys cosmetics?